११ अचम्मलाग्दा दिमागी कसरतहरु जुन सजिला छन् र दिमागलाई तेज बनाउँछन् - ज्ञानविज्ञान
ससाना दिमागी कसरतहरुले दिमागलाई स्वस्थ बनाउँछन् । यहाँ लेखिएका दिमागी कसरतहरु गर्नुहोस् जसले स्मरण शक्ति घट्ने क्रमलाई रोक्छ भने दिमाग पनि तेज बनाउँछ । आफु गर्नुहोस् र आफ्ना बच्चाहरुलाई पनि सम्भव भएसम्म गराउँनुहोस् ।
धेरैले भन्दै गरेको सुनिन्छ, ‘मेरो त दिमाग नै बोधो छ’ या घरका ठुलाबडा वा शिक्षकहरुले भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ, ‘यसको त दिमाग नै बोधो छ ।’ त्यस्तै आफु स्मार्ट हुनका लागि दिमाग तेज बनाउँन चाहनेहरुको पनि कमि छैन ।
मान्छेले मुखै खोलेर नभनेको हुन सक्छ । अझ धेरै मानिसहरु त जन्मजात नै म यस्तो भनेर चित्त बुझाएर बसेका पनि हुन सक्छन् तर दिमाग तेज बनाउँने र आफु स्मार्ट बन्न सक्ने कुरा असम्भव भने होइन ।
दृष्य, गन्ध, स्पर्श, स्वाद र श्रव्यलाई संवेगसँग मिसाएर गरिने क्रियाकलापले दिमागका भिन्न भिन्न क्षेत्रमा उत्प्रेरणा जगाउँछन् जसले स्नायु कोषहरुमा दिमागलाई चाहिने पौष्टिकतामा वृदि गर्छन् । यसले स्मरण क्षमतामा वृदि गर्छ, दिमागका कोषहरुलाई मजबुत बनाउँछ र उमेरसँगै हुने ह्रासलाई कटौति गर्छ ।
यहाँ उल्लेख भएका दिमागी कसरतहरुलाई बिहान बिहान वा आफुलाई पायक पर्ने समयमा प्रयोग गर्नुहोस् र, यसले पार्ने फरकपनाको महसुस गर्नुहोस् ।
१. धेरै प्रयोग नगर्ने हातले दाँत ब्रस गर्नुहोस्
अध्ययनहरुले देखाए अनुसार हाम्रो हातलाई विपरित तिरको मस्तिष्कले चलाइरहेको हुन्छ । जस्तै : देब्रे हातलाई दाहिने मस्तिष्क र दाहिने हातलाई देब्रे मस्तिष्कले चलाउँछ ।
यसकारण सँधै उहि काममा प्रयोग हुने हातको सट्टामा अर्को हातले सो काम गर्दा मस्तिष्कमा नयाँ सूचना प्रसारित हुन्छ । मस्तिष्कको नयाँ क्षेत्रमा तरंग पुग्छ । यसले गर्दा मस्तिष्क सामान्य भन्दा बढि र फरक किसिमले प्रयोग हुने गर्छ ।
यसकारण सँधै दाहिने हातले ब्रस समाएर दाँत ब्रस गर्नु हुन्छ भने देब्रे हातले ब्रस गर्नुहोस् र ट्युब खोल्दा पनि सँधै गर्ने भन्दा फरक हातको प्रयोग गर्नुहोस् ।
२. आँखा चिम्लेर नुहाउँनुहोस्
तपाईले बन्द आँखाले नुहाउँदा तपाईको हातले आफ्नै शरिरको बनावट र फरकपना थाहा पाउँछ । जसले गर्दा आफुले नदेखेको शरिरको कुरा हातको माध्यमबाट दिमागसम्म सन्देश पुग्छ । यसैल नुहाउँन सुरु गरेदेखि नुहाएर सक्दा सम्म आँखा चिम्लेर आफ्नो स्पर्श ज्ञानेन्द्रियलाई थप सबल बनाउँनुहोस् ।
नयाँ किसिमले आएको सन्देशसँग मस्तिष्क अभ्यस्त नहुनाले मस्तिष्कले फरक किसिमले प्रतिक्रिया दिन थाल्छ ।
३. रुटिन बदल्नुहोस्
बिहान उठेर गर्ने कामहरु लगभग सबै उस्तै हुन्छन् । सँधै एउटै कामहरु गरिरहदा दिमागी स्मरण भन्दा मांसपेशीको स्मरण मजबुत भएको हुन सक्छ । यसैले आफ्नो रुटिनलाई बदल्नुहोस् ।
जस्तै तपाई मर्निङ वाकमा जानुहुन्छ भने बाटो बदल्नुहोस् । हरेक दिन हिडेको बाटोमा नयाँपन त्यति हुदैन । सो बाटोमा हुने सामान्य खाल्डाखुल्डीसम्ममा दिमाग अभ्यस्त भइसकेको हुन्छ जसले गर्दा दिमागलाई सचेत भइराख्ने जरुरत पर्दैन ।
एक्कासी रुट परिवर्तन गर्दा दिमागले नयाँ कुराहरु देख्न पाउँछ । यसका लागि दिमाग सक्रिय भइराख्न पर्छ ।
४. सामानहरुलाई उल्टो पारेर राख्नुहोस्
जस्तै: भित्ताको घडी । तपाईको दिमागले थाहा पाइसकेको हुन्छ कि भित्ताको कहाँनेर घडी छ र त्यसको काँटा कहाँ निर पुग्दा कति बजेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईले भित्ताको घडीलाई तलतिर फर्काएर झुन्ड्याइदिनु भयो भने ?
पक्कै पनि तपाईको दिमागले नयाँ कुरा देख्नेछ । तपाईको दिमागलाई कति बज्यो भन्ने पत्ता लगाउँन केहि बेर सक्रिय हुनु पर्नेछ । यस्तोमा दिमाग सक्रिय रहन बानी पर्नेछ ।
५. खाना खान बस्ने कुर्सीहरुको स्थान फेरिदिनुहोस्
घरमा प्राय मानिसहरु सामान्यतया एउटै कुर्सी वा स्थानमा बस्ने गर्छन् । यस्तोमा दिमागलाई फरकपना दिनका लागि सँधै बस्ने कुर्सीको स्थान परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
यस्तै, नियमित उहि स्थानमा गरिने कुराहरुको स्थान परिवर्तन गरेर पनि दिमागलाई कसरत गराउँन सकिन्छ ।
६. नाकमा नयाँ गन्ध पुगोस्
तपाईले बिर्सि सक्नु भएको हुन सक्छ, एकाबिहानै पिउँने कफी वा चियाको गन्ध कस्तो छ ? तपाईको दिमाग त्यसमा अभ्यस्त भएर त्यसको वास्ता गर्न छोडिसकेको हुन सक्छ ।
यसैले नयाँ गन्धको कफी वा चिया पिउँने गर्नुहोस् । नयाँ गन्धको अगरबत्ती ल्याउँने गर्नुहोस् । यसले पक्कै पनि दिमागको कसरत बढाउँछ ।
७. सिक्का पैसासँग खेल्नुहोस्
किनभने तपाईको दिमागले नियमित देखिने कुरामा फरक पाउँदैन । सिक्काहरु खेलाउँदा त्यसको स्पर्श र आवाजले तपाईको दिमागमा नयाँपन दिन्छ । सिक्कामा भएको रेखाहरुको बारेमा सम्झन खोज्नुहोस् ।
८. समूहमा रचनात्मक काम गर्नुहोस्
रचनात्मक कामहरुले मस्तिष्कको सेरिब्रल कर्टेक्सलाई सक्रिय बनाउँछ । तपाईले गर्ने कुनै रचनात्मक क्रियाकलाप जस्तै: कविता लेख्ने, चित्र बनाउँने कामले दिमागको सोच्ने क्षमता तथा रंगहरु बुझ्ने क्षमतामा विकास गर्छ ।
समूहमा काम यस्तो काम गर्दा फरक फरक निर्णयहरुका बिचमा काम गर्नु पर्ने भएकाले दिमाग तेज बन्छ र थप सक्रिय हुन पाउँछ ।
९. मानिसहरुसँग सम्पर्क बढाउँनुहोस्
अध्ययनले बताए अनुसार समाज वा मानिसहरुसँग बेग्लै बस्नाले दिमागमा नकारात्मक कुराहरु बढ्न थाल्छन् । यसैले दिनदिनै गरिने कामहरुमा मानिससँग सम्पर्क बढाउँनु राम्रो हुन्छ ।
जस्तै : पसलमा भएका सामानका बारेमा पसलेसँग कुरा गर्ने । गाडीमा कतै जाँदा नजिकको सिटका मान्छेसँग कुरा गर्ने । मेसिनबाट सामान निकाल्ने भन्दा पसलेसँग माग्ने । आदि आदि ।
१०. फरक किसिमले पढ्नुहोस्
सँधै पढ्ने शैलिलाई परिवर्तन गर्दा पनि फरकपना महसुस हुन्छ । शान्त भएर पढ्नेले स्वर निकालेर पढ्ने वा स्वर निकालेर पढ्नेले शान्त भएर पढ्ने गर्दा पनि दिमागलाई कसरत हुने गर्छ ।
११. नयाँ स्वादका खानेकुरा खाने
सँधै एकनासको खानाको सट्टा फरक किसिमको खाना खाँदा नयाँपन महसुस हुने गर्छ । सँधै जस्तो मम र चाउमिनको सट्टा नयाँ स्वादका परिकार चाख्दा मस्तिष्कमा नयाँ सन्देश प्रवाह हुन्छ ।
सँधै बाहिर गएर नयाँ स्वाद चाख्नुको सट्टा घरैमा नयाँ नयाँ परिकारहरु बनाउँदा झन् उपयोगी हुने गर्छ ।
तपाईको रमाइलो तथा दिमागी कसरतका लागि यहाँ हामीले दिमाग खियाउँने प्रश्नहरुको भिडियो लिएर आएका छौँ । यो निर्भिक टल्क्स च्यानलमा भएको दिमाग खियाउँने प्रश्नहरुको भाग ९ हो ।
Don't Miss it आफ्नाे शरीरको बनावट अनुसार कस्तो खानपान ठिक ? जान्नुहाेस्
Up Next धेरै समय दूध उमाल्ने बानि छ ? यस्ता साइड इफेक्ट हुनसक्छन्
स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले महिलाको बच्चा जन्माउने उपयुक्त उमेर कति हो ?